FARITANIN’I TOAMASINA : Olona roa hita faty an-dranomasina tao anatin’ny herinandro
Nitelina mpanjono iray indray ny ranomasina etsy Analankinina hopitaly be anelanelan’ny Lisea Jacques Rabemananjara sy tobin’ny miaramila 1/Rm3. 18 octobre 2021
Ny sabotsy 9 oktobra tokony ho tamin’ny 10 ora antoandro no tsikaritr’ ireo namany fa tsy hita i Joma Steve, mpanjono. Ankoatra izay dia nahitana razana hafa koa teny an-dranomasina amin’ny Dépot, tamin’ny alarobia maraina. Raha iverenana ny raharaha dia manomboka miandriaka ireto andiana mpanjono ao Analankinina Hopitaly be ireo amin’ny 5 ora maraina amin’ny toetr’andro tsara ary miverina miakatra amin’ny 9 na 10 ora mitondra izay trondro azo aloha hamidy eny an-tsena ary efa miandry eny amoron-drano rahateo ireo mpividy na koa ny vadin’ ireo mpanjono.
Eo amin’ny famakiana onja mialoha ny hahatongavana eny afovoan’ny ranomasina sy fivoahana ny onja hahatongavana eny amin’ny torapasika no matetika somary manahirana eo amin’ ireo fampiasana lakana angogo ( lakana hazo entina amina fivoy) ho an’ny mpanjono mandinika matetika. Izay indrindra no nahazo an’ ity ranamana ity teo amin’ny fivoahana ny onja hihazo ny tora-pasika, izay tsy maintsy miroboka an-drano no sady manosika ny lakana misy ny hazandrano iny izy no nijibika tampoka ary nanohy ny fanosehana an’ izany lakana izany ny namany. Ireto farany izay nihevitra azy ho nilalao ranomasina kely aloha. Nandeha kanefa ny fotoana, miandry ireo namany tsy mety hita izy.
Efa nahatratra hatramin’ny ora iray mahery anefa tsy nety niboaka ihany ireo tsy hita, ka teo vao very hevitra ary nampilaza ny namana rehetra mpisehatra amin’ny asa fanjonoana, ireto farany kosa niantso an’ i Lalaina zanadrano manampahaizana manokana ara-pombandrazana amina fikarohana olona atelin’ny ranomasina.
Nanota fady ka nangataka rà
Taorian’ny fahatongavan’ i Lalaina na antsoina amin’ny anaram-bositra hoe Lalaina zanadrano, ilay tovolahy manampahaizana manokana ara-pomban-drazana amin’ny fikarohana fatin’ olona na olona atelin’nyranomasina dia nilaza ity tovolahy ity raha vao avy nijibika tao ambany ranomasina fa nanotafady izy io ka mila lio na rà ny zavatra mihazona azy ao ary tsy havoakan’ izy ireo izy raha tsy miala eto amoron-dranomasina avokoa ny olona rehetra, ka mialoha ny filentehan’ny masoandro izany ny sabotsy teo. Vokany, iray tamin’ny fianakavian’ ity tovolahy natelin’ny ranomasina ity no nandratrà ny tanany teo amoron-dranomasina mifanitsy amin’ny faritra nanomboka tsy nahitana azy, ka natete tao amin’ny ranomasina izany rà izany. Nony vita izany fa saingy tsy mbola nanaiky niala teo ireo fokonolona maro be fianakaviamben’ ireo mpisehatra amin’ny hazan-dranomasina hany ka tsy navoakan’ ilay nolazain’ i Lalaina fa mihazona azy ao an-dranomasina ilay tovolahy vao 29 taona ity. Nandritra fandalovanay tao an-toerana mialoha ny hanoratana ny lahatsoratra dia fokonolona maro ny ao an-toerana, ireto farany izay nanao karazana fiaretan-tory teo amoron-dranomasina ny alin’ny sabotsy mandra-marainan’ny alahady, izay mbola nanamafisan’ i Lalaina zanadrano fa tsy mivoaka io razana io raha tsy manaiky miala eto amoron-dranomasina ireo olona maro be ireo. Ny fanadihadiana tamin’ ireo namany no nahalalana fa nisotro toaka hatramin’ny misasak’alina izy ny zoma alina ka tsy afaka ny fofon-toaka sy mbola hita soritra tany aminy ny maha olona mamo azy ka izay no heverina ho fanotana fady nataony. Tsy tian’ny ranomasina ny miroboka aminy raha vao mbola manjaka ny fahamamoana amin’ olona iray.
Telo andro taty aoriana vao hita faty
Telo andro taty aoriana vao natsingevan’ny ranomasina ny vatana mangatsiakan’ i Joma Steve, ilay tovolahy 29 taona mpanarato be monina ao Analankinina hopitaly be, izay natelin’ny ranomasina ny sabotsy maraina, teo anelanelan’ny tobin’ny miaramila sy Lisea Jacques Rabemananjara. Ny alatsinainy 11 oktobra tokony ho tamin’ny 2 ora tolakandro teo amin’ny faritra nilatsahany ihany no nivoahan’ny vatana mangatsiakany. Amin’ny akapobeany dia mistery tsy takatry ny saina ny zava-nisy niantomboka tsy nahitana azy ny sabotsy ka hatramin’ny alatsinainy indrindra taorian’ny nijibihan’ i Lalaina zanadrano mpitady olona maty an-drano. Nilaza ity farany mbola ao anaty ranomasina izy ny alahady teo fa saingy hazomin’ ireo biby mihazona azy anaty ranomasina koa ilaina ny akanjo nataony farany ahatona eo amoron-dranomasina dia mety havoakan’ izy ireo izy. Natao tokoa izany ka izao nahitam-bokany izao.
Fatin-dehilahy hafa koa
Fa ny alarobia maraina teo indray dia fatin-dehilahy iray sahabo 40 taona indray no hitan’ny fokonolona natsingevan’ny ranomasina teny Dépot, ka niantsoana ny tompon’ andrakitra avy amin’ny BMH an’ny kaominina izany. Nandritra ny fizahana nataon’ ireto farany no nahalalana aloha fa misy ratra ny tavany ary mbola mandeha ra ny eo amin’ny sofiny izay. Sokajiana ho nisy namono ka natsipy tany an-dranomasina ny vatana mangatsiakany. Mbola taratry ny tsy fandriampahalemana hatrany izany na eo aza ny tanamaron’ny fandriampahalemana ataon’ny mpitandro ny filaminana ao Toamasina amin’ izao fotona izao.